KA FIIRSO INTAAD BAAHIN – hogaanka.org
KA FIIRSO INTAAD BAAHIN
Anigu shaqsiyan ma hubo mana ogi in uu codkani yahay mid run ah oo u dhacay sidaa hadhwanaagnews inoo soo tabisey,mana cadeyn karo in uu ka soo baxay Fadumo Siciid oo codkeedii yahay iyo in kale.Balse waxaa aan isweydiinayaa su’aalahan oo u baahan in loo helo jawaab toosa.
1- Ma saxbaa in Qof qof kale la hadlaya aad ka duubtid codkiisa isaga oo aan ogeyn?
2-Shuruucda xuquuqda adamiga iyo xoriyada shaqsiga ahi side ayey u arkaan arinta korku xusan?
3- Maxaa kaga soo baxay codkan ujeedada ka dambeysa?
4- Fasiraada suxufiga ee codkaa uu ina maqashiiyey wuxuu inoogu sheegay in ay hogaaminayso xildhibaano kulmiye ah, sidaa miyeyno ka maqalney codka gabadhan la inoogu sheegay?
Inta badan Suxufiyiintu waxay qaab sir ah u duuban wada sheekeysi dhex maraya laba qof ama in ka badan dabadeedna waa ay tebiyaan ama dabacaan iyaga oo aan kala kulmin dhinaca sharciga wax dhibaatooyin ah.
Sababtoo ah waxay marka hore ba waxay xaqiijiyaan labada arimood ee ugu muhiimsan sharci ahaan in aad ilaalisid oo kala ah:
a) ogolaasho u helid (consent) ama
b) dood xaqiiqo ah oo salka ku haysa in duubitaankani ay ku jirto qaranka dantiisa (Public interest).
labadaa qodob ayaa u suurta geliya in aaney suxufiyiinta dalalka dumuqraadiga ahi dhinaca sharciga kala kulmin dhibaatooyin inta badan balse hadii ay marka horeba xaqiijin waayaan labadaa arimood mid kood in ay salka ku hayso duubista codadka waxay wajahaan dhibaato dhinaca sharciga ah waayo waxay jebinayaan sharciga qayb ka mida sida xoriyada xuquuqda dadka kale iwm.
Hadaba idinka ayaa ka garnaqi doodaaasi balse aniga waxay iila muuqadaa mid aan haysan rukumo sharci ah in la daabaco ama la baahiyo cod aan cadeyn xaqiiqanimadiisa.
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) welcomes Somalia’s ratification of the Kampala Convention Previous
Methodology: The 50 Wealthiest Countries in the World Next